Latest TachileikNews News!
33. ရောဂါကင်းသည့်အသားများ ထုတ်လုပ်ရန် သားသတ်လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျစစ်ဆေးခြင်းကို မကွေးတိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် ဆောင်ရွက်မည်	-TachileikNews
#ပြည်တွင်း	(01h ago)
32. တာချီလိတ်မြို့တွင်း ရေပေးဝေရေးကို သြဂုတ်လ(၁၇)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ ဖြတ်တောက်ထားမည်	-TachileikNews
31. လားရှိုးမှ ရန်ကုန်သို့သယ်ဆောင်မည့် စိတ်ကြွဆေးပြား (၅၈၅၀၀၀)ပြားကို လားရှိုးခရီးသည်တင်ကားဂိတ်တွင် ဖမ်းမိ	-TachileikNews
30. မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်(၆)ဦးကို ခွင့်ပြုထား	-TachileikNews
#ပြည်တွင်း	(20h ago)
29. ပြည်ပတင်ပို့မည့်နွားများ နယ်စပ်၌ထားရှိရောင်းချနိုင်မည့်နေရာ ဖေါ်ဆောင်ရေး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ လုပ်ဆောင်နေ	-TachileikNews
#ပြည်တွင်း	(1d ago)
28. တာလေတွင် လူငယ်တစ်ဦး နေအိမ်၌ ကြိုးဆွဲချသေဆုံးသွား၍ ယခုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံး ကြိုးဆွဲချမှုဖြစ်ပွား	-TachileikNews
27. ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၌ ခွေး (၅)ကောင် ဝိုင်းကိုက်ခံရ၍ အသက်(၄)နှစ်အရွယ်ကလေးသေဆုံး	-TachileikNews
#မှုခင်း	(1d ago)
26. ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း အမိုးအကာနှင့် အကာအရံများ မပြုလုပ်ပဲ မောင်းနှင်သည့် အုတ်၊သဲ၊ကျောက်နှင့်မြေကြီးတင် ယာဉ်များအား စည်ပင်အက်ဥပဒေဖြင့် သြဂုတ်လ(၂၀)ရက်နေ့တွင် စတင် အရေးယူမည်	-TachileikNews
25. သီပေါမြို့ရှိ သီတဂူစက္ခုဒါနဆေးရုံတွင် စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်မှ စ၍ (၅)ရက်တိုင်တိုင် မျက်စိစမ်းသပ်၊ ကုသမှု အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်	-TachileikNews
24. ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မိုင်းဇင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်သုံးစွဲနေကြောင်း သတင်းရသည့် နေအိမ်မှ စိတ်ကြွဆေးပြား ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
23. ထိုင်းဘက်မှ မိုးရွာမှုနှင့်အတူ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဓါတ်တိုင်များ လဲကျပျက်စီးရာက တာချီလိတ်မီးလင်းရေးအပိုင်း(၂) လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်	-TachileikNews
#မီးလင်းရေး	(1d ago)
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်းခရိုင်အတွင်း မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အတူ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဓါတ်မီးတိုင်အချို့ လဲကျပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရာ ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၄)ရက်နေ့ ည(၈)နာရီဝန်းကျင်က စ၍ တာချီလိတ်မြို့ မြန်မာ - ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး အမှတ်(၂)တံတားမှ မြို့ပြင် မိုင်းကိုးကျေးရွာအုပ်စု နှင့် မိုင်းဖုန်းကျေးရွာအုပ်စု အထိ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နေရာများသို့ ပုံမှန်အတိုင်း လျှပ်စစ်မီး ပြန်လည်ရရှိရန် ထိုင်းဘက်မှ ဆောင်ရွက်နေလျှက်ရှိကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုအချိန်မည်မျှ ကြာမည်ကို မသိနိုင်သေးကြောင်း တာချီလိတ်မီးလင်းရေးရုံးခွဲ(တာဝေ)ထံက သိရှိရသည်။
ထိုငျးနိုငျငံ ခငျြးရိုငျးခရိုငျအတှငျး မိုးရှာသှနျးမှုနှငျ့အတူ ရတေိုကျစားမှုကွောငျ့ ဓာတျမီးတိုငျအခြို့ လဲကပြကျြစီးမှုမြား ဖွဈပျေါနရော ၂၀၁၈ခုနှဈ သွဂုတျလ(၁၄)ရကျနေ့ ည(၈)နာရီဝနျးကငျြက စ၍ တာခြီလိတျမွို့ မွနျမာ - ထိုငျး ခဈြကွညျရေး အမှတျ(၂)တံတားမှ မွို့ပွငျ မိုငျးကိုးကြေးရှာအုပျစု နှငျ့ မိုငျးဖုနျးကြေးရှာအုပျစု အထိ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျမှုမြားဖွဈပျေါနလြှေကျရှိကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ နရောမြားသို့ ပုံမှနျအတိုငျး လြှပျစဈမီး ပွနျလညျရရှိရနျ ထိုငျးဘကျမှ ဆောငျရှကျနလြှေကျရှိကွောငျးနှငျ့ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျမှုအခြိနျမညျမြှ ကွာမညျကို မသိနိုငျသေးကွောငျး တာခြီလိတျမီးလငျးရေးရုံးခှဲ(တောဝ)ထံက သိရှိရသညျ။
22. နောင်ချိုမြို့အ၀င်တွင် ကားဖြင့်မောင်းလာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးထံက မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
#Nay Phyo Myint	(2d ago)
21. ကျိုင်းတုံတွင် လမ်းဖြတ်ကူးသည့် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးအား ပထမနှစ်ကျောင်းသား မောင်းနှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် တိုက်မိမှု ဖြစ်ပွား	-TachileikNews
20. ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၆၀၀)ပြား သယ်ဆောင်လာသူကို ဖမ်းမိပြီးနောက် ထပ်မံဖေါ်ထုတ်ချက်အရ သုံးစွဲသူနှင့် ရောင်းချသူ (၃)ဦးတို့ကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
19. လွိုင်ကော် - ပင်လောင်းကားလမ်းတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား (၈)ပြားသယ်လာသူကို ဖမ်းမိ	-TachileikNews
#မူးယစ်သတင်း	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ ကုန်းပေါရွာအနီး လွိုင်ကော် - ပင်လောင်းကားလမ်းတွင် လွိုင်ကော်ဘက်မှ ပင်လောင်းဘက်သို့ သယ်ဆောင်လာသည့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၈)ပြားကို အမျိုးသားတစ်ဦးထံက ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။
ကုန်းပေါရွာအနီးတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့နှင့် သက်သေများ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့က ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်နေ့၌ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေရာ နံနက်(၅)နာရီအချိန်တွင် လွိုင်ကော်ဘက်မှ ပင်လောင်းဘက်သို့ ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသည့် မောင်ခဲဆိုသူအား စစ်ဆေးရာ ၎င်းလွယ်ထားသည့် လွယ်အိတ်အတွင်းမှ စိတ်ကြွဆေးပြား (၈)ပြားကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်ခဲအား ပင်လောင်းမြို့မရဲစခန်းတွင် မယ(ပ) ၃၂/၂၀၁၈၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး) ပငျလောငျးမွို့နယျ၊ ကုနျးပေါရှာအနီး လှိုငျကျော - ပငျလောငျးကားလမျးတှငျ လှိုငျကျောဘကျမှ ပငျလောငျးဘကျသို့ သယျဆောငျလာသညျ့ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား (၈)ပွားကို အမြိုးသားတဈဦးထံက ဖမျးဆီးရမိကွောငျး သိရသညျ။
ကုနျးပေါရှာအနီးတှငျ ရဲတပျဖှဲ့၊ မူးယဈတပျဖှဲ့နှငျ့ သကျသမြေား ပါဝငျသညျ့အဖှဲ့က ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ(၁၃)ရကျနေ့၌ ပိတျဆို့စဈဆေးနရော နံနကျ(၅)နာရီအခြိနျတှငျ လှိုငျကျောဘကျမှ ပငျလောငျးဘကျသို့ ဆိုငျကယျမောငျးနှငျလာသညျ့ မောငျခဲဆိုသူအား စဈဆေးရာ၎င်းငျးလှယျထားသညျ့ လှယျအိတျအတှငျးမှ စိတျကွှဆေးပွား (၈)ပွားကို ဖမျးဆီးရမိခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မောငျခဲအား ပငျလောငျးမွို့မရဲစခနျးတှငျ မယ(ပ) ၃၂/၂၀၁၈၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၆(ဂ)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး သိရသညျ။
18. ပင်လောင်းမှ ဖယ်ခုံဘက်သို့ စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၆၀၀) သယ်လာသည့် အမျိုးသား တစ်ဦးကို ဖမ်းမိ	-TachileikNews
17. မိုင်းတုံမြို့နယ် နားကောင်းမူးတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး တူမီးသေနတ် တစ်လက်ဖြင့် ဆူပူရမ်းကား၍ အရေးယူခံရ	-TachileikNews
#မိုင်းတုံ	(3d ago)
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ နားကောင်းမူးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့က လက်လုပ် တူမီးသေနတ်ဖြင့် ဆူပူရမ်းကားနေသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
16. မွန်ပြည်နယ် အလှပ်ကမ်းခြေမှာ ပင်လယ်ရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်	-TachileikNews
မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်တွင်းက အလှပ်​​ကျေးရွာမှာ ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့ ညနေ(၃)နာရီဝန်းကျင်က ပင်လယ်ဒီရေ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် လူနေအိမ် (၃၀)ကျော် ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်းများနဲ့ အလှပ်တိုက်နယ်ဆေးရုံအတွင်းမှာ ရေများဝင်ရောက်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
VDO : Silwin Oo
15. ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မိုင်းကွီးရွာအတွင်း အမျိုးသားတစ်ဦးထံက မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
14. တာချီလိတ်မှ လူငယ်အားကစားသမား (၃)ဦး ပါဝင်သည့် U 12 မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း သြဂုတ်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်းတို့နှင့် ကစားမည်	-TachileikNews
ဖွင့်ရန်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပနေသည့် တရုတ် -
13. မူဆယ် - နမ့်ခင်းလမ်းပိုင်းတွင် (၆)ဘီးနှင့်အထက်ယာဉ်များ အတက်၊ အဆင်းအလှည့်ကျ ဖြတ်သန်းခွင့်ကို သြဂုတ်လ(၁၁)ရက်နေ့ကစ၍ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ဆောင်နေ	-TachileikNews
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မူဆယ် - နမ့်ခမ်းလမ်းပိုင်းအား ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်၍ (၆)ဘီးနှင့် အထက်ယာဉ်များကို အတက်၊အဆင်း တစ်ရက်စီ အလှည့်ကျ ဖြတ်သန်းခွင့်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၁) ရက်နေ့မှစ၍ ဆောင်ရွက်သွားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမှတ် (၁၂၂) ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စု (မူဆယ်ခရိုင် ) ထံမှ သိရသည်။
12. လူငယ် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မိုင်းတုံမြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပြည်သူ့စကားဝိုင်း ပြုလုပ်ကာ ဆွေးနွေးဖလှယ်	-TachileikNews
စကားဝိုင်းကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောမူးလာ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသောမတ်၊
11. လားရှိုးမြို့နယ် ရှန်ခိုက်ကျေးရွာအတွင်း ဓါးနှောင့်အတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြား ထည့်သွင်း သယ်ဆောင်လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့နယ်၊ ရှန်ခိုက်ကျေးရွာ၊ ရှန်ခိုက်ဘုရားအနီးတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၁)ရက်နေ့ည (၈)နာရီ (၄၅)မိနစ်အချိန်က ဓါးနှောင့်အတွင်း စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၈)ပြား ထည့်သွင်း သယ်ဆောင်လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။
ရှန်ခိုက်ကျေးရွာဘက်မှ မန်ဟောင်ကျေးရွာဘက်သို့ လမ်းလျှောက်လာသည့် နေလင်းဆိုသူအား ရှာဖွေရာ အရိုးအသွား(၁၆)လက်မခန့်ရှိသည့် ဓါးဦးချွန်၏ ဓါးနှောင့်အတွင်းမှ စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၈)ပြားကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဖမ်းဆီးရမိသည့် အသက်(၃၃)နှစ်ဝန်းကျင်ရှိ နေလင်းဆိုသူအား လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းတွင် မယ(ပ) ၁၅၆/၂၀၁၈၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၆(ဂ)/၂၂(ခ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး) လားရှိုးမွို့နယျ၊ ရှနျခိုကျကြေးရှာ၊ ရှနျခိုကျဘုရားအနီးတှငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ (၁၁)ရကျနညေ့ (၈)နာရီ (၄၅)မိနဈအခြိနျက ဓားနှောငျ့အတှငျး စိတျကွှဆေးပွား (၁၈)ပွား ထညျ့သှငျး သယျဆောငျလာသညျ့ အမြိုးသားတဈဦးကို ဖမျးဆီးရမိကွောငျး သိရသညျ။
ရှနျခိုကျကြေးရှာဘကျမှ မနျဟောငျကြေးရှာဘကျသို့ လမျးလြှောကျလာသညျ့ နလေငျးဆိုသူအား ရှာဖှရော အရိုးအသှား(၁၆)လကျမခနျ့ရှိသညျ့ ဓားဦးခြှနျ၏ ဓားနှောငျ့အတှငျးမှ စိတျကွှဆေးပွား (၁၈)ပွားကို ဖမျးဆီးရမိခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ ဖမျးဆီးရမိသညျ့ အသကျ(၃၃)နှဈဝနျးကငျြရှိ နလေငျးဆိုသူအား လားရှိုးမွို့မရဲစခနျးတှငျ မယ(ပ) ၁၅၆/၂၀၁၈၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၆(ဂ)/၂၂(ခ)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး သိရသညျ။
10. ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု တာချီလိတ်ဖူဆယ် အမျိုးသားအသင်း အုပ်စုပထမဖြင့် ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်သို့ တက်ရောက်	-TachileikNews
9. တာချီလိတ် နယ်စပ် ၀င်/ထွက်ပေါက်မှ တရားဝင် ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုထားမှု အခြေအနေများ	-TachileikNews
တာချီလိတ်ကနေ တစ်ဖက် နိုင်ငံကို တရားဝင် သွားရောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာနဲ့ တာချီလိတ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ - ထိုင်းချစ်ကြည်ရေး အမှတ်(၁)တံတားကနေ လ၀က နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများကို ခရိုင်လ၀ကဦးစီးမှူးက ရှင်းပြပေးထားတာကို တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီက တက်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
စီစဉ်သူ - ချယ်ရီထိုက်
ရိုက်ကူး - မင်းသိန်းကျော်
8. ဆိုင်ကယ်သော့ မပါဘဲ မောင်းလာသူကို ဆိုင်ကယ်ခိုးလာသည်ဟု ယူဆရ၍ ကျိုင်းတုံမြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထား	-TachileikNews
7. ကျောက်မဲမြို့နယ် ချောင်းချောက်ကျေးရွာအနီးတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရ၍ သေဆုံး၊ ယာဉ်မောင်းမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေ	-TachileikNews
ဖွင့်ရန်။ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကျောက်မဲမြို့နယ် ချောင်းချောက်ကျေးရွာအနီး ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်နေ့ နံနက် (၂)နာရီဝန်းကျင်က အမျိုးသားတစ်ဦး ယာဉ်တိုက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားသဖြင့် ယာဉ်တိုက်မှုမှ ထွက်ပြေးနေသည့် ယာဉ်နှင့်ယာဉ်မောင်းအား စုံစမ်း ရှာဖွေနေကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီ အမျိုးသားက အဲဒီလိုပဲ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေတတ်တဲ့သူလို့ စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။ ယာဉ်တိုက်ခံရပြီး လမ်းဘေးမြေသားလမ်းပေါ်မှာ သေဆုံးနေတာတွေ့ရှိရတာပါ ” ဟု ကျောက်မဲမြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်ဇင်မင်းထွန်းက တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၁၆/၂) နှင့် (၁၁၆/၃) ကြား လမ်းဘေးတွင် အသက်(၃၀)ခန့်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးအား သေဆုံးလျှက် တွေ့ရှိကြောင်း သတင်းရသဖြင့် အမှတ်(၁၂၀)ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စု (ကျောက်မဲ)မှ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး အလောင်းအား ဇီဝိတလူမှုကူညီရေးအသင်းက ကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်မဲမြို့မရဲစခန်းတွင် ယာဉ်(ပ)၂၉/၂၀၁၈၊ ပုဒ်မ ၃၀၄-က/ ၂၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ထွက်ပြေးယာဉ်နှင့်ယာဉ်မောင်း ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဓါတ်ပုံ - ဇီဝိတလူမှုကူညီရေးအသင်း
6. ဓါတ်တိုင်ပေါ်တက်၍ စက်ပစ္စည်းတပ်ဆင်သူ အလုပ်သမားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံးမှု ကျိုင်းတုံတွင် ဖြစ်ပွား	-TachileikNews
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့၊ ယန်းလောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေါ်ခုတ်မြို့သစ်ရပ်ကွက်ရှိ ဓါတ်တိုင်များတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၁)ရက်နေ့က DB Box တပ်နေသည့် အလုပ်သမားတစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသဖြင့်
5. ကျိုင်းတုံမြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် လမ်းပေါ်ရေကျော်၍ ရေအမြန်ကျရေး စုပေါင်းဆောင်ရွက်	-TachileikNews
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၂)ရက်နေ့ နံနက်(၁)နာရီခွဲမှ (၆)နာရီအထိ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် ကျိုင်းတုံ - မိုင်းခတ်ကားလမ်း၌ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်မှ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် အထိ အရှည်ပေ(၆၀၀)ခန့်မှာ
4. ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ညီအစ်ကို နှစ်ဦးထံက စိတ်ကြွဆေးပြား (၅၀)ပြား ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
3. လေယာဉ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ခရီးသည်တင် လေယာဉ်အား ခိုးယူမောင်းသွားကာ ကီထရွန်ကျွန်းတွင် ပျက်ကျ	-TachileikNews
2. တာချီလိတ်ကို ကျော်လွန်ကာ မယ်ဆိုင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးထံက မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ	-TachileikNews
1. တာချီလိတ်ခရိုင်ဆေးရုံကြီး၌ တတိယအကြိမ် အသဲရောင် ဘီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရမည့် သွေးလှူရှင်များ သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် လာရောက်ထိုးနှံရမည်	-TachileikNews
#ကျန်းမာရေး	(6d ago)
တာချီလိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တတိယအကြိမ် အသဲရောင် ဘီကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရမည့် သွေးလှူရှင်များအား ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့က တာချီလိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် အသဲရောင် B ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခဲ့သည့် သွေးလှူရှင်များကို ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တတိယအကြိမ် ဆေးထိုးနှံပေးခြင်းအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်နေ့ နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီအထိ တာချီလိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးသူများ အနေဖြင့် လာရောက် ထိုးနှံရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တာခြီလိတျခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ တတိယအကွိမျ အသဲရောငျ ဘီကာကှယျဆေးထိုးနှံရမညျ့ သှေးလှူရှငျမြားအား ၂၀၁၈ခုနှဈ သွဂုတျလ(၁၃)ရကျနတှေ့ငျ ထိုးနှံပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ကမ်ဘာ့သှေးလှူရှငျမြားနကေ့ တာခြီလိတျခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ အသဲရောငျ B ကာကှယျဆေး ထိုးနှံခဲ့သညျ့ သှေးလှူရှငျမြားကို ဒုတိယအကွိမျ ထိုးနှံပေးခဲ့ပွီးနောကျ နောကျဆုံးအကွိမျ အဖွဈ တတိယအကွိမျ ဆေးထိုးနှံပေးခွငျးအား ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ(၁၃)ရကျနေ့ နံနကျ (၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီအထိ တာခြီလိတျခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၌ ထိုးနှံပေးသှားမညျဖွဈသညျ့အတှကျ နှဈကွိမျထိုးနှံပွီးသူမြား အနဖွငျေ့ လာရောကျ ထိုးနှံရနျ လိုအပျကွောငျး သိရသညျ။